Video Editing အကြောင်းလေးတွေ ... - Page2- မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
Video Editing အကြောင်းလေးတွေ ...
ပြန်စာ - Video Editing အကြောင်းလေးတွေ ...
how to add more time to add the premier6.5 and i have avi file is6hours and how to add the premier and premier can i add only3hours . how to slove it?
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ kyitoore အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by kyitoore
Originally Posted by kyitoore
how to add more time to add the premier6.5 and i have avi file is6hours and how to add the premier and premier can i add only3hours . how to slove it? onlinehelpergrup@
ဟုတ်ကဲ့ ... premiere ထဲကို input လုပ်လို့ လုံးဝ မရဘူးလား ... premiere 2.0 မှာရော စမ်းကြည့်သေးလား မသိဘူးဗျာ ... အဆင်မပြေရင် အဲဒီ ဖိုင် တင်လိုက်ဗျာ ... ကျနော် ကြိုးစားကြည့်ပေးပါမယ် ...
ကိုလေးအောင်, paulgyi, thetzin
22-03-2009, 09:16 PM
ကျနော် effect ထဲတာလေး ပြောပြပါမယ် … ကျနော် အကြံပြုချင်တာကတော့ ဒီ effect တွေ ကို သေချာတစ်ခု ချင်း ကိုယ်တိုင် စမ်းကြည့်စေချင်ပါတယ် … effect တွေ က များတော့ မလုပ်တာ ကြာတဲ့ အခါ မေ့နိုင်ပါတယ် … အဲတော့ မှတ်စု လေးရေးထားရင် ဘယ်လောက် ကြာမှ ပဲ လုပ်လုပ် အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ … ကျနော် နမူနာလေး လုပ်ပြလိုက်ပါမယ် ခင်ဗျာ …
Effect ထဲ က ကြိုက်နှစ်သက်ရာ effect တစ်ခု ကို ယူပြီး ဒီတိုင်းပဲ Edit mode ထဲကို ဆွဲထည့်လိုက်ပါ ခင်ဗျာ ... ခု မှ စလုပ်တဲ့ သူများအတွက်တော့ ပုံနှစ်ခု ရဲ့ အဆက် ကို သေချာကြည့်စေချင်ပါတယ် ဗျာ ... ဘယ်လို လဲ ဆိုတော့ မထပ်ဘဲ တည့်ထည့်မယ် ဆိုရင် လည်း ရနိုင်ပါတယ် ... ဒါပေမယ့် မစပ်ဆက်ဘဲ screen အမည်းကြီးပါနေပါလိမ့်မယ် ... ဒါကြောင့် အစပ်နှစ်ခု နေရာကို ကျနော် ထပ်ထားပါတယ် ... ကျနော် တို့ ulead effect တွေ ကို တည့်ထပ်ပါတယ် .. ခု ဒီမှာကတော့ ပုံမှာ မြင်တဲ့ အတိုင်း အပေါ်က effect ကများနည်းနည်းများ ပိုသွားမယ် ဆိုရင် အောက်က အလွတ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ အတွက် screen အမည်းကြီးနဲ့ ပေါ်နေပါမယ် .. preview သေချာကြည့်ပြီးမှ ထည့်ပေးပါခင်ဗျာ .. အဲဒီ effect ကို လည်း select လုပ်ပြီး time line လိုသလောက် ဆွဲဆန့်နိုင်ပါတယ် ... အောက်က ပုံလေးတွေ ကတော့ preview လေးပေါ့ဗျာ .....
ကို paulgyi ခင်ဗျာ ... ထုံးစံအတိုင်း ဒီ နားလေးမှာ ယူသွားပါဗျာ ...
Last edited by bonge; 22-03-2009 at 09:17 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ bonge အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုလေးအောင်, ဖန်ဆင်းရှင်, ဖိုးထိန်, paulgyi, thetzin, thurein
24-03-2009, 06:55 PM
အစ်ကိုရေ ဒီအတိုင်းတော့ ရပ်မထားလေနဲ့ဗျာ
28-03-2009, 05:32 AM
ပြန်စာ - မှတ်စု အတိုအထွာ...
Effect အတွက် ကျနော် ရေးမှတ်ခဲ့တဲ့ မှတ်စု အတိုအထွာလေးတွေ ပါ။ အမြဲတမ်းလုပ်နေတဲ့ အချိန်မှာ မမေ့ပေမယ့် တစ်နှစ်လောက်ကြာသွားရင် ဘယ်ထဲမှာ ဘယ် effect ရှိတယ် ဆိုတာ တော်တော် ပြန်ရှာရပါတယ်။ နှစ်တွေ ဘယ်လောက်ကြာကြာ လိုချင်တဲ့ အချိန်မှာ လိုချင်တဲ့ effect ချက်ချင်း ရဖို့ ကတော့ ဒီနည်းက အသုံးဝင်ပါမယ် ဗျာ။ ကျနော် ရဲ့ ထင်မြင်ချက်ပါ ခင်ဗျာ ဥပမာ - သီချင်း တစ်ပုဒ်ကြည့်လို့ effect တစ်ခု ကို တွေ့တဲ့ အခါ သုံးလဲ သုံးမယ် မသုံးတာလဲ ကြာပြီ ဆိုရင် စာအုပ်လှန်ကြည့်လိုက်တာ နဲ့ ချက်ချင်းသိနိုင်ပါတယ် လေ။ နောက် premiere က တခြား editing soft တွေနဲ့ မတူပါဘူး။ effect အရမ်းများပါတယ်။ version တွေ မြှင့်ပေမယ့် effect တွေ နေရာမပြောင်းသလို ဘာမှ ပြောင်းမသွားပါဘူး။ ထပ်တိုးလားတာပဲ ရှိပါတယ်။ အဲဒါ ကြောင့် အသုံးတဲ့မယ် ထင်လို့ ကျနော် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျနော် သဘောပေါက်သလို မှတ်ထားတာ ဖြစ်လို့ မှတ်စုနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အဆင်မပြေတာ အလိုမကျတာရှိခဲ့ရင် ကျနော် ရဲ့ အားနည်းချက်သာ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ ...
Transitions အတွက်ကတော့ ကျနော် scanner ဖတ်ပြီးတာနဲ့ ထပ်တင်ပေးပါမယ် ဗျာ ...
ခု effect တွေ ကို လည်း တစ်ခုချင်း သေချာ လုပ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ အဆင်မပြေတာကို ကျနော် ကို မေးပါ အားမနာပါနဲ့
ကို paulgyi အတွက် ဒီ မှာ ပါ
ကို paulgyi ကို တော့ ဇွဲဇွဲရှိရှိ တစိုက်မတ်မတ် လိုက်လုပ်နေတဲ့ အတွက် လေးစားမိပါတယ် ဘာပဲ လေ့လာလေ့လာ အဲလိုပဲ ဖြစ်စေချင်တာပါ ခင်ဗျား မဖတ်ရင် လဲ ရေးဖြစ်မှာ မဟုတ်လောက်ဘူး နှစ်ဦး နှစ်ဖတ်အကြိုးရှိမှ ရေးရကြိုး ဖတ်ရကြိုးနပ်မယ်လေ ကျနော် လဲ အားရင် အားသလို တင်တင်ပေးသွားပါမယ် ဆက်တိုက် မတင်ပေးနိုင်သေးတာကိုတော့ ခွင့်လွတ်ပေးပါ ကောင်းခန်းတွေ လာတော့မှာ ပါ လေ့လာဖြစ်အောင် လေ့လာသွားပါ။ ဒီတိုင်းကြီး မထားပါဘူးဗျာ ကျနော် အာမခံထားတဲ့ အတိုင်း ဖတ်သူရှိသမျှ ကျနော် ကျိုးစားပြီး တင်တင်ပေးပါမယ် ဗျာ
Last edited by bonge; 28-03-2009 at 05:41 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ bonge အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုဖြိုးငြိမ်း, ကိုလေးအောင်, ဖန်ဆင်းရှင်, ဇော်ရဲပိုင်, boya, phoepa1982, thetzin
ပို့စ်5ခုအတွက် 8 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ ကျော်ကြီး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ကျော်ကြီး
Originally Posted by ကျော်ကြီး
ကိုကျော်ကြီး သိချင်တာက premiere မှာနော်။ premiere ကျနော် သိတာကတော့ Sequnce->Render Work Area ( Enter ) ဆိုရင် ရပါပြီ။ Render လုပ်တာ မြန်မြန်လုပ်တာက အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Video Effects က Render အောက်မှာ အများကြီးရှိပါတယ်။ အဲဒါ လဲ Render ပါပဲ။ သူအောက်မှာ အများကြီးပါပဲ။ ဘယ်လို သိချင်တာလဲ လို့ ကျနော်မေးပါရစေနော်။ ကျနော် ကို ဖြစ်ချင်တာ လုပ်ချင်တာလေး အဆင်မပြေတာကို အသေးစိတ်လေး ရေးပေးပါ။ Premiere မှာပေါ့နော်။ ကျနော် ကြိုးစားဖြေပေးပါမယ်။ Render ဘယ်လိုလုပ်ချင်တယ် ဆိုတာကို အသေးစိတ်ပြန်ရေးပေးပါ ကျနော် အဓိပ္ပါယ်ကောက်လွဲနေမှာ ဆိုးလို့ပါ
Last edited by bonge; 02-04-2009 at 08:19 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ bonge အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုလေးအောင်, ကျော်ကြီး, boya, phoepa1982, thetzin
လိုအပ်မယ် ထင်တဲ့သူယူပေါ့ဗျာ။ ခု ချိန်ထိတော့ ဒါတွေပါပဲ။ Version မြှင့်လာရင်လဲ အဟောင်းကို ပဲ နည်းနည်း
ကိုpaulgyi အတွက် က ဒီ မှာ ပါဗျာ။
Last edited by bonge; 03-04-2009 at 10:42 PM..
ကိုလေးအောင်, ဖန်ဆင်းရှင်, ကျော်ကြီး, ဇော်ရဲပိုင်, boya, phoepa1982, thetzin
ပြန်စာ - tutorials လေးတွေပါ ...
ကျနော် ဆွေးနွေးပြီး သလောက် ထိ အလွယ်တကူ လေ့လာလို့ရအောင် tutorial လေးတွေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီထိ အဆင်မပြေတာလေးတွေ ရှိရင် မေးခွန်းလေးတွေ မေးနိုင်ပါတယ်။ ကျနော် တတ်နိုင်သလောက် ကြိုးစားပြီး ဖြေပေးပါမယ်။ လုပ်ဖြစ်အောင်တော့ လုပ်ကြနော်။ ကျနော် ဆက်ဆွေးနွေးပေးပါမယ်
PreviewingaSequence=>
မိသားစုဝင်တွေ အားလုံးသင်္ကြန်ရေနဲ့ အတူ စိတ်နှလုံးအေးမြ ပျော်ရွှင်အောင်မြင်ကြပါစေ ...
ကိုလေးအောင်, ဖန်ဆင်းရှင်, ဇော်ရဲပိုင်, boya, thetzin, youngman47
16-04-2009, 04:24 AM
ပြန်စာ -Title ထည့်မယ် ...
ကျနော် တို့ Premiere မှာ Title တစ်ခု ထည့်တာကို ကျနော် ဆက်ပြောပေးပါမယ်။ Premiere ကို ဖွင့်ပါ။ File -> New -> Title ( or ) F9 ကိုနှိပ်ပါ။ Title ဘားပေါ်လာတာနဲ့ အဲဒီ Title ဘားပေါ်မှာ စာရိုက်ပါမယ်။ ကျနော် အောက်မှာ ပြထားတဲ့ ပုံတွေ အတိုင်းလုပ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။
ကျနော် လုပ်ပြတာလေးတွေ video ဖိုင်လေး ကြည့်လိုက်ရင်တော့ ခဏပါပဲ ဗျာ။
ဒီမှာ ပါ။ အားလုံး အတွက် အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။
နှစ်သစ်မှသည် ထာဝရပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေ ...
Last edited by bonge; 16-04-2009 at 04:24 AM..
ကိုလေးအောင်, ဖန်ဆင်းရှင်, ဇော်ရဲပိုင်, thetzin, thurein
20-04-2009, 04:20 PM
ပို့စ် 165 ခုအတွက် 639 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကို ဗိုလ်ငယ် ရေ..
ပထမဆုံးအနေနဲ့ ကျွန်တော် စမေးတော့မယ်နော်...
ကျွန်တော်က VCD သီချင်းတွေမှာ စာတမ်းထိုးတဲ့ဟာကို လုပ်ချင်လို့ပါ..
စာသားလေးတွေက သီချင်းစဆိုတာနဲ့ အရောင်ပြောင်းသွားတာကို သိချင်လို့ပါခင်ဗျာ..
အဲဒီလို လုပ်တတ်ချင်ခဲ့တာ ကြာပါပြီ..Ulead ကိုတော့သုံးဖူးပါတယ်...
Premiere က ပိုကောင်းတယ်ပြောလို့ပါ
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ ဖန်ဆင်းရှင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ဖန်ဆင်းရှင်
မင်္ဂလာပါ ဗျာ ကိုဖန်ဆင်းရှင်
ဟုတ်ကဲ့ အကို ပြောသလို လုပ်ချင်တာကိုတော့ Premiere မှာ လဲ လုပ်လို့ တော့ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဆင့်တွေ အရမ်းများမယ်ဗျ။ VCD စာတမ်း ထိုးတာကို သက်သက် software တစ်ခုနဲ့ လုပ်ကြတယ်လို့ ကျနော် ထင်တယ်ဗျာ။ ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့ Premiere နဲ့ အဲလောက်ကြီး အချိန်ကုန်မခံလောက်ဘူးထင်တယ်။ စာတမ်းထိုးဖို့ အတွက် သက်သက် လုပ်ကြမယ် ထင်တယ်။ Premiere နဲ့ လဲ အချိန်တော်တော် ပေးရလိမ့်မယ်ဗျာ။ အဲဒါ လေး အကို စုံစမ်းကြည့်ပါလား သူတို့ ဘာကို သုံးပြီး ထိုးကြသလဲ ဆိုတာ သိရင် ကျနော် တို့ နှစ်ဦး နှစ်ဖက် အကျိုးရှိတာပေါ့ဗျာ။ Premiere မှာ လဲ ဖြစ်အောင် လုပ်မယ် ဆိုရင်တော့ လည်း ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဆင့်များမယ်။ ကျနော် လဲ စာတမ်း ထိုးတော့ ထိုးတယ် သံစဉ် ကိုက်ပြီး တထည်ရတည်း ကျအောင်တော့ မထိုးဖူးသေးဘူး ဗျ ကျနော် ပြောတာ စုံစမ်းကြည့်ပေးပါ။ သူတို့ ဘယ်လို ဖြေမလဲ ပေါ့နော် ။ အဲဒီ soft ရှိနေတယ် ဆိုရင်တော့ လဲ ကျနော် တို့ အချိန်ကုန်ခံပြီး မထိုးတော့ဘူးလေ ။ ထိုးစရာ မလိုတော့ ဘူးပေါ့ဗျာ ။ Professional Standard တော့ မှီ ချင်မှ လဲ မှီမယ်။ ကျော်ရင် လဲ ကျော်မယ် ဒါ က ကျနော် တို့ ကြိုးစားတဲ့ အပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ Premiere မှာတော့ တော်တော်ရတယ်ဗျ ကျနော် လည်း သုံးနေတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျနော် မသိတာတွေ ကိုး ရှိပါသေးတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ ခုလို အားတက် တရော နဲ့ လေ့လာနေတာ တွေ့တော့ ဂုဏ်ယူပါတယ်ဗျာ ကျနော် ဖက်က လည်း အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားပေးပါမယ်
အဆင်ပြေပျော်ရွှင်စွာနဲ့ လေ့လာနိုင်ပါစေ ...
Last edited by bonge; 20-04-2009 at 05:35 PM..
ကိုလေးအောင်, ဖန်ဆင်းရှင်, ဇော်ရဲပိုင်, boya, KoBaKhat, thetzin
22-04-2009, 09:26 AM
ကျွန်တော် သိချင်တာတွေကများနေတော့ ဘာမေးရမှန်းကို မသိသေးလို့ဗျ..
23-04-2009, 06:13 AM
ပြန်စာ - photoshop ဖိုင်လေးထည့်မယ်
ဒါ ဆိုလည်း ဆက်ဆွဲကြမယ် ဗျာ
ခု ကျနော် ဆွေးနွေးပေးမှာက photoshop ဖိုင်လေး တွေ Premiere မှာ ထည့်သုံးနိုင်ဖို့ ပါ။ အဲလို ထည့်သုံးလို့ ရတော့ အားသားချက်တွေ အများကြီး ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဘယ်လို ကောင်းလဲ ကတော့ လုပ်ရင်းနဲ့ သိနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ ဆိုကြပါစို့ ။ ကျနော် တို့ က ဓါတ်ပုံ ကို layer ပဲ ယူမယ် နောက် က background ကြီး မလိုချင်ဘူးဆိုရင် ဒီအဆင့်လေးက ကောင်းပါတယ်ဗျာ။ နောက်ကောက် ဆိုတဲ့ သီချင်းကို မျက်စိထဲ မြင်ကြည့်ပေးပါ။ မြင်ပြီလား အဲဒီထဲမှာ ကျနော်မှတ်မိသလောက်တော့ အသဲပုံကြီး တုန်တာကို ပြတယ် မလား။ အဲဒါ photoshop ဖိုင်လေး ကို လှုပ်ပြထားတာပါ။ နောက်က video ဖိုင်ပေါ်မှာ Image ကို သက်ဝင်အောင် လှုပ်ပြထားတဲ့ သဘောပေါ့နော်။
ကဲ ကျနော် လုပ်ပြတာကို တဆင့်ခြင်းကြည့်ပေးပါဦး ...
အဲဒီ အဆင့်တွေ အတိုင်း ထည့်ကြည့်ပေးပါ။ Import လုပ်တာကတော့ File->Import ( or ) Ctrl+I ဆိုရင် ရပါပြီ။ နောက်ပြီး ကျနော် ရွေးထားတဲ့ အတိုင်း layer ကို ရွေးပေးပါ။ အလယ်ပုံမှာ ထပ်ထားတဲ့ အတိုင်း ထပ်ကြည့်ပါ။ ကလေးနေရာမှာ video ဖိုင်တွေလဲ သုံးနိုင်ပါတယ်။ အသဲပုံလေးထဲ မှာ video ဖိုင်ထည့်တာတို့ ဘာတို့ က တော့ ဒီ ပုံစံမျိုးပါပဲ။ ခု လုပ်တာ နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကျနော် လက်တွေ့ သုံးထားပါတယ်။ ဒီ မှာ သွားပြီး အားပေးလိုက်ပါဗျာ
ပညာပြည့်ဝ နှလုံးလှပါစေ ...
ကိုဖန်ဆင်းရှင် ကို ကျနော် အကြံပြုချင်တာကတော့ ဘာမေးရမှန်းမသိသေးဘူး ဆိုတော့ ကျနော် စရေးခဲ့တဲ့ နေရာကနေ အစ အဆုံးဖတ်ပြီး လိုက်လုပ်ကြည့်ပြီးပြီလား လက်တွေ့ လိုက်လုပ်ကြည့်ပေးပါ။ အခက်အခဲ အဆင်မပြေတာလေး တွေ ကို ရှိလာတဲ့ အခါ ကျနော်ကို မေးပါ။ ရှိလာမှာပါပဲ။ ဖတ်ယုံတော့ မဖတ်ပါနဲ့နော် နောက်က လက်တွေ့ လိုက်လုပ်စေချင်ပါတယ်။ တကယ်ရစေချင်လို့ ပါ။ အဲလို လိုက်လုပ်လို့ ပြဿနာလေးတွေ ရှိတဲ့ အခါ ကျနော် နဲ့ ဆွေးနွေးမယ်လေ ကျနော် ခု ဆွေးနွေးတာက ဖတ်တဲ့ သူ ကို အဓိ က ထားပြီး ဆွေးနွေးတဲ့ စတိုင်ပါ။ ကျောင်းသားကို အဓိကထားတာပေါ့နော် foreign မှာ ရှင်းသလို ကျောင်းသားကို အရင် စာဖတ်ခိုင်းပြီး ဆရာ နဲ့ ဆွေးနွေးကြသလို မျိုး ပေါ့ ။ အဲဒီ နည်းက ပိုပြီး လိုက်လုပ်တဲ့ သူ တတ်လို့ ပါ။
အဆင်ပြေပျော်ရွှင်စွာနဲ့ လေ့လာနိုင်ပါစေ ...
Last edited by bonge; 23-04-2009 at 06:15 AM..
23-04-2009, 10:18 AM
ဟုတ်ကဲ့ပါ ကို ဗိုလ်ငယ်ရေ..
အစ်ကိုပြောထားတာနဲ့ ကျွန်တော်သိတာတွေကို ပေါင်းပြီးလုပ်တော့
ဒီ သင်ခန်းစာလေးကို ဆက်ပြီးလုပ်ကြည့်လိုက်အုံးမယ်ဗျ..
မြန်မာမိသားစု သီချင်းလေးကို ကျွန်တော်နားထောင်ပြီးပြီ..
ကြည့်လည်းကြည့်ပြီးပြီ..အစ်ကိုရဲ့ effect တွေက တကယ်မိုက်တယ်ဗျာ...
ရေးထားတဲ့စာသားတွေကို တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အပေါ်တက်တက်သွားအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရပါသလဲခင်ဗျ..
နောက်တစ်ခုက စက်ဝိုင်းပုံလေး transition က ဘာeffect လဲခင်ဗျာ..
24-04-2009, 05:29 AM
မင်္ဂလာပါ ဗျာ ကိုဖန်ဆင်းရှင် ...
စာသားတွေ အပေါ်ကို တဖြည်းဖြည်းတက်သွားတာကတော့ ကျနော် Margin ပေးပြီး လုပ်ထားတာပါ။ လိုချင်တဲ့ ဖတ်လို့ ရမယ့် အနေအထား ဆိုဒ်ကို ကျနော် အရင် သတ်မှတ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ စမှတ်ကို မှတ်လိုက်တယ် ကျနော် Time Line မှာ အမှတ်ပေးတာကို ရှေ့မှာ ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ ပြီးတော့ အရွယ်အစားနဲ့ အနေအထားမပြောင်းဘဲ ကျနော် လိုချင်တဲ့ ထိအောင် အောက်ဆုံးထိအောင် စာကို ဆွဲချလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ လိုတဲ့ အနေအထားရောက် ရင် ဆုံးမှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီ အမှတ်နှစ်ခု အတွင်းမှာ ကျနော်က အပေါ်ကနေ အထက်ကို တက်အောင် ဆွဲထားတာ ဖြစ်လို့ အမှတ်နှစ်ခု အကွာ အဝေးကြဲရင် နှေးနှေးပေါ်ပါမယ်။ အကွာအဝေး စိတ်ရင်တော့ မြန်မြန်ပေါ်ပါမယ်။
ဒီ effect ကတော့ Sphere ပါ။ Video Transitions -> GPU Transitions -> Sphere ရှိပါတယ်။
စာတန်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ အပေါ်ကို တတ်တာ မရရင် ပြန်ပြောပေးပါ။ မရရင် ကျနော် ပုံနဲ့ တင်ပေးပါမယ်။ ကျနော် သိသလောက်ကတော့ ကျနော် ကြိုးစားပေးနေပါမယ်။ ကြိုးစားပါဗျာ ကျနော် အတွက်တော့ ပညာ ပါရမီပေါ့နော်။ ကျနော် သာ ဘာမှ မဟုတ်တာပါ ကိုယ်လူမျိုး တွေ ပညာရေး မှာ အရမ်းတတ် အရမ်းထက် စေချင်တဲ့ ဆန္ဒ ကျနော်မှာ ပြင်းပြတယ်ဗျာ ( စကားလုံးကြီး သွားမလား။ ကျနော် ပုံမှန် font နဲ့ပဲ ရေးနေတာပါ )
ကျနော် လည်း ဘယ်လောက်ပဲ အလုပ်များများ ဒီပိုစ်မှာ ကိုဖန်ဆင်းရှင် အားတတ်သရောလေ့လာနေတော့ နေ့စဉ် ကြည့်ပြီး ဖြေပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားနေပါတယ်နော် ခွေကို အားပေးတဲ့ အတွက်ရော ခုလို အားတတ်သရော နဲ့ လေ့လာနေတဲ့ အတွက်ပါ ထပ်ဆင့်
Last edited by bonge; 24-04-2009 at 10:16 PM..
ကိုလေးအောင်, ဖန်ဆင်းရှင်, ဇော်ရဲပိုင်, boya, thetzin, yawnathan, Ye Aung
24-04-2009, 10:35 AM
အစ်ကိုပြောသလိုပဲ လုပ်ကြည့်တာ ရတယ်ဗျ..
အဆင်လည်းပြေပါတယ်...အစ်ကိုပြောတဲ့ စာတန်းထိုးတဲ့ software ကို
ကျွန်တော်ဖိုရမ်မှာ တောင်းထားတယ်ဗျ..ရရင် အစ်ကို့ကို ကျွန်တော်ပြောမယ်လေ...
ကျွန်တော်က ဒီဟာကို စိတ်ဝင်စားနေတာကြာပြီ..အခုမှပဲ စပြီးလုပ်ဖြစ်တော့တယ်..
အားလုံးအတွက် ကိုဗိုလ်ငယ်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
နောက်ထပ် သင်ခန်းစာတွေကိုလည်း အားရင် တင်ပေးပါလို့ ကျွန်တော် အမြဲဖတ်ပြီး လေ့ကျင့်နေပါတယ်လို့..
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ ဖန်ဆင်းရှင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုလေးအောင်, bonge, thetzin
28-04-2009, 02:07 PM
ကျွန်တော် စာတန်းထိုးတဲ့ software ကိုတော့ တွေ့ပြီဗျ
ဒါပေမယ့် မြန်မာလို အဆင်မပြေဘူးဗျ...အဲဒါ အစ်ကိုသုံးကြည့်ပြီးတော့
ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် ပေါင်းစပ်လိုက်ရင် အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်ဗျ..
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ ဖန်ဆင်းရှင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုလေးအောင်, bonge, boya, thetzin
29-04-2009, 06:15 PM
video editing software တွေထဲမှာတော့ power director ultra7ကိုသုံးကြည့်စေချင်ပါတယ်။ transition ၁၀၀ကျော် effect ၇၀ လောက်ပါ ပါတယ်။့ hardware ကတော့ တောင်းပါတယ်။ transitions /effect ၁၀၀၀ လောက်ကိုလည်း free ဒေါင်းလို့ရပါတယ်။ magix နဲ့တွဲသုံးမယ်ဆိုရင် pro dvd ကားတကားလောက်ကိုဖန်တီးလို့ရပါတယ်။ soung effect လေးတွေ ကတော့ တော်တော်သဘောကျဖို့ကောင်းတယ်။ လိုချင်တယ်ဆိုရင်တင်ပေးပါမယ်။ 180 mbလောက်ရှိတယ်။magix က200 ကျော်တယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ mmmaung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုလေးအောင်, ညီခဝေ, ကျော်ကြီး, bonge, boya, thetzin
29-04-2009, 07:11 PM
Originally Posted by mmmaung
ကို mmmaung ရေ..
အစ်ကိုက editing စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ တစ်ခုလောက်မေးချင်လို့ပါ
ကျွန်တော်တို့ VCD စာတန်ထိုးတဲ့နေရာမှာသံစဉ်လာတာနဲ့ အရောင်ပြောင်းတာလေးကို
သီးသန့်လုပ်တဲ့ software ရှိရင် လမ်းညွှန်ပါအုံးခင်ဗျာ..ကျွန်တော် အခု အဲဒါနဲ့ တိုင်ပတ်နေလို့ပါ..
ရှိတဲ့ software က မြန်မာfont နဲ့အဆင်မပြေလို့ပါ...VCD သီချင်းတွေ နားထောင်ပြီး
အစ်ကိုက စာတန်းထိုးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်ကြားဖူးတာက After effect software
နဲ့ လုပ်၇တယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ် အဲဒါကို Premier software နဲ့ ပေါင်းရတယ်ဆိုတာလောက်ဘဲ သိတယ်လေ
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ paulgyi အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုလေးအောင်, ဖန်ဆင်းရှင်, bonge, boya, thetzin
29-04-2009, 10:42 PM
ဟုတ်ကဲ့ ခင်ဗျာ ကိုmmmaung အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် တင်ပေးစေလိုပါတယ်
အသုံးပြုပုံ ပြုနည်းလေးတွေ ရောပေါ့ဗျာ။ ဒီခေါင်းစဉ်က ကျနော်တင်ထားတဲ့ ပိုစ်ဖြစ်နေပေမယ့် ဖိုရမ်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းပေါ့ဗျာ ကျနော်တို့ ဘယ်သူပဲတင်တင် မိသားစုဝင်တွေ ကျနော်တို့ မြန်မာတွေ နည်းပညာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး နောက်မကျဖို့ ပဲ မဟုတ်ပါလားခင်ဗျာ အဲတော့ အကို အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် လဲ software လေးတွေ တင်ပေးပြီး ပုံလေးတွေ နဲ့ ရှင်းပြစေလိုပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ ကိုPaulgyi ပြောသလို After Effects ကတော့ တော်တော်ကြီးကို ကောင်းပါတယ်။ သွေးတွေ ဘာတွေ ထွက်တာ ကျည်ဆံတွေ ပြေးအောင်လုပ်တာ သူပေါ့ စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေ ရှိရင် tutorial တွေ တင်ပေးပါမယ်။ ကျနော် ကလည်း ကျောင်းစာနဲ့ ဆိုတော့ Editing ကို ဆက်ပြီး မလေ့လာဖြစ်ဘူး။ တစ်ခါတလေ ပျင်းရင်တော့ လုပ်ပါတယ်။ လုပ်ချင်တဲ့ အချိန်အဆင်ပြေအောင်တော့ စုထားပါတယ်။
ဘယ်သူပဲ ၀င်ပြီး ဆွေးနွေးပေး ဆွေးနွေးပေး အားလုံးက ရည်ရွယ်ချက် တူတဲ့ ညီအကိုမောင်နှမတွေ ဖြစ်လို့ ဖတ်တဲ့သူ လေ့လာတဲ့သူ ရသွားဖို့က အဓိကပါပဲ။ ကျနော် ဆွေးနွေးပေးမှရယ် မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ
ကျနော် ဒီခေါင်စဉ်တင်ပြီး ဆွေးနွေးဖြစ်သွားတာက ကျနော်ပြောခဲ့ပေါ့ရော ကျနော်တတ်လို့ မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာ နာမည်အတွက်လဲ မဟုတ် သူများလေးစားဖို့လဲ မဟုတ်ရပါ ဒါဆို ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့ ကိုယ်ကိုယ်ကို လေးစားချင်လို့ပါ ( ကျနော် မိသားစုက ဆွဲကောင်းကောင်းနဲ့ ဆွဲနေတာ အရမ်းများပါတယ် )
တလက်ဆက်တည်း ကျနော်တင်ထားတဲ့ ပိုစ်တွေ ကို ကျနော်နာမည်မပါဘဲ အခြားသောဘယ်နေရာမှာ မဆို ပြန်လည်မျှဝေခြင်းကို ကျနော် လက်ခံပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျနော် ဆီက ခွင့်တောင်းဖို့ မလိုပါခင်ဗျာ သက်ဆိုင်ရာက က ဖိုရမ်အုပ်ချုပ်သူတွေ ကြီးကြပ်သူတွေ ၊ စည်းကမ်းတွေနဲ့တော့ မညှိစေနဲ့ပေါ့ဗျာ
ဘယ်သူလုပ်လို့ ပဲ တိုးတတ် တိုးတတ် လေ့လာသူတွေ လိုချင်တာ ရသွားဖို့ ပဲ တိုးတတ်လာဖို့က ပဲ အဓိက ပါဗျာ bonge တင်ပေးလို့ ဆိုတာတွေက အရေးမကြီးပါဘူး အလုပ်ဖြစ်မြောက်အောင်မြင်သွားဖို့ ပဲ အရေးကြီးပါတယ် ( အုတ်တစ်ချပ် သဲတစ်ပွင့်ပမာ ပေါ့ဗျာ ... )
Last edited by bonge; 29-04-2009 at 10:44 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်9ဦးတို့မှ bonge အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုဦး, ကိုလေးအောင်, ဇော်ရဲပိုင်, boya, lawliet, LynnHtin, thetzin, thurein, zo
30-04-2009, 04:21 AM
ဒီမှာ software .. မြန်မာဖောင့်လဲအဆင်ပြေပါတယ် ။ http://www.mediafire.com/?sharekey=0...fea1504832b5fb
tutorial ကကျနော်စက်ကတင်ထားတာမို့လို့ နည်းနည်းသီးခံပါ။ နောက်နေ့မှတခုခုကတင်ပေးပါ့မယ်။
Last edited by mmmaung; 30-04-2009 at 04:58 AM..
ကိုလေးအောင်, ဖန်ဆင်းရှင်, ဇော်ရဲပိုင်, boya, KoBaKhat, tu tu
30-04-2009, 04:33 AM
ဒါက power director
Last edited by mmmaung; 30-04-2009 at 04:36 AM..
ကိုလေးအောင်, ဖန်ဆင်းရှင်, ဇော်ရဲပိုင်, bonge, thetzin, tu tu
30-04-2009, 09:57 AM
အခု software လေးတင်ပေးလိုက်တာနဲ့တင် တော်တော်လေးကို ကျေးဇူးတင်မဆုံးဖြစ်နေတာပါဗျာ
တကယ် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်..ကျွန်တော် အဲဒါကို လုပ်တတ်ချင်နေတာကြာပြီ..အကူအညီတောင်း
တဲ့သူတွေလည်း မနည်းတော့ဘူး..အခုမှပဲ အဆင်ပြေသွားတော့တယ်..လောလောဆယ်တော့ ကျွန်တော်
software နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စာကို အရင်ဖတ်ထားပါ့မယ်...မြန်မာစာတန်းထိုးတစ်ခုလောက်ကို
အော်..ကျွန်တော် ခရီး(၃)ရက်လောက်ထွက်ရအုံးမယ်..ပြန်လာမှ ဆက်ပြီးလေ့လာပါ့မယ်...
Last edited by ဖန်ဆင်းရှင်; 30-04-2009 at 10:17 AM..
ပို့စ် 21 ခုအတွက် 41 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျွန်တော် Ulead video studio 11 မှာ ဗွီဒီယိုဖိုင်နှစ်ခုကိုထပ်တာရယ်
ပြီးတော့ ဓါတ်ပုံနဲ့ ဗွီဒီယိုပေါင်းတာရယ်လုပ်ချင်လို့
ကျွန်တော်က အဓိကလုပ်ချင်တာကတော့ mp3 သီချင်းတွေကိုနောက်ခံထည့်မယ်
ပြီးတော့ ဗွီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုရယ် ပြီးတော့အဲပေါ်မှာ ဓါတ်ပုံကို ဝါးတားတားပုံလေးနဲ့
ထည့်ပြီတော့ ခွေတစ်ခွေ ထုတ်ချင်တာ အဲဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
ဆိုတာပြောပြပေးပါ ကျွန်တော်အိမ်မှာစမ်းတော့ ကလိနေတာပဲ
ဖိုင်နှစ်ခုထပ်တာကိုမလုပ်တတ်လို့ အဲဒါ အစ်ကိုအစ်မများက
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ lawliet အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုလေးအောင်, minminc, thetzin
ဒီလိုလုပ်ကြည့်ပေးပါ။ video ဖိုင်နှစ်ဖိုင်ထပ်တာက ulead 11 ကိုဖွင့်တဲ့ အချိန်မှာ Edit Effect Overlay ဆိုတာတွေ တယ်မလား။ အဲဒီ ထဲက Overlay က ထပ်တာပါ။ ထပ်ပြီးရှင်းအောင် ပြောရရင် Edit ကိုနှိပ်ပါ။ Browse ကနေ video ဖိုင်ကို ထည့်ပေးပါ။ အဲဒီ ဖိုင်ကို အောက်မှာ မြင်နေရတဲ့ track တွေထဲက အပေါ်ဆုံး track မှာ ထည့်ပေးပါ။ အဲဒီ track က Edit ပါ။ ခု အဲလို ပဲ နောက် တစ်ဖိုင်ထပ်ရွေး။ မတူရင်ပိုကောင်းပါတယ်။ အဲဒီဖိုင်ကိုပဲ ခုန ထည့်ခဲ့တဲ့ ဖိုင်ရဲ့အောက်မှာ ထည့်ပါ။ အဲဒီ track က Overlay ပါ။ အဲဒီ track ကိုထောက်လိုက်တာနဲ့ အပေါ်မှာလည်း Overlay ဆိုပြီး အလိုလို ပြောင်းနေပါလိမ့်မယ်။ ခုအဲဒီ မှာ မှ
video input လုပ်တဲ့ထဲက video filter ဆိုတာ ကို ရွေးပြီး သုံးကြည့်ပါ။
ဟုတ်ကဲ့ ဒါကလည်း အပေါ်မှာ ပြောခဲတာနဲ့ အတူတူပါပဲခင်ဗျာ။ ခုနတုန်းက video ကို ရွေးပြီး Browse နှိပ်ပြီးထည့်တယ်။ ခု image ကိုရွေးပြီး ထည့်မယ်။ အဲဒါပါပဲ။ အောက် က track နှစ်ခုမှာ ထည့်တာကတော့ အပေါ်မှာ ရှင်းတဲ့ အတိုင်း အတူတူပါပဲခင်ဗျာ။
ပြီးတော့အဲပေါ်မှာ ဓါတ်ပုံကို ဝါးတားတားပုံလေးနဲ့
အဲဒါကတော့ ကျနော်တို့ MP-3 ကို နောက်ခံထည့်မှာ ဆိုတော့ image နဲ့ချည်းပဲ ဆို ကိစ္စမရှိပါဘူး။ video ဖိုင်ပါလာမယ်ဆိုတော့ သူမှာ အသံပါလာမယ်။ အဲဒီ အသံကို ကျနော်တို့ အောက်က track ကိုထောက်လိုက်ရင် preview monitor ဘေးမှာ ပေါ်နေတဲ့ video အောက်က Edit မှာ အသံပုံဘေးက 100 ကို0ထိလျှော့ချလိုက်ပါ။ အဲဒါ မှ ကျနော် တို့ ထည့်မယ့် MP3 နဲ့ အဆင်ပြေပါမယ်။ သူကို မလျှော့ထားရင် Video ဖိုင်မှာ ပါတဲ့ အသံတွေနဲ့ ရူပ်ထွေးနေပါမယ်။ ပုံကို ၀ါးမယ်ဆိုရင် ထည့်ချင်တဲ့ ပုံကို Overlay ( video track နှစ်ခုမှာ အောက်က track ) မှာ ထည့်ပြီး သူကို ထောက်လိုက်ရင် အပေါ်မှာ Edit & Attribute ဆိုတာ တွေ့ရပါမယ်။ အဲဒီထဲက မှ Attribute->Mask&Chroma Key အဲဒါ ကို နှိပ်ပြီးတာနဲ့ transparent လုပ်ဖို့ box ပေါ်လာပါမယ်။ ပထမဆုံး box မှာ ကိုလုပ်ချင်သလောက် ထည့်ကြည့်ပါ။ ဥပမာ- 50 လောက်ထည့်ကြည့် ပါ။ တစ်ဝက်လောက် ၀ါးသွားပါပြီ။ လိုချင်သလောက်လုပ်ကြည့်ပါ။
ခွေတစ်ခွေ ထုတ်တာကတော့ ကျနော် ဒီပိုစ်မှာ ပဲ Menu လှလှလေးတွေ ဖောက်တာ တင်ပေးပါမယ်။ ခုလောလောဆယ်တော့ မကြာမှီ လာမည်မျှော်ပေါ့ဗျာ စာပိ နေလို့ ပါဗျာ ခု ကျနော် ပြောတာတွေ နဲ့ video ဖိုင်လေးတွေ တာ ဖြစ်အောင် အရင်လုပ်ထားလိုက်ပါ။ ကျနော် အားတာနဲ့ တင်ပေးပါမယ်။
ဒါနဲ့ အကိုရေ Premiere နဲ့ မလုပ်ရလို့ လည်း စိတ်ဓါတ်မကျပါနဲ့။ Ulead နဲ့လဲ တော်တော်ရပါတယ်။ သူကို ကောင်းကောင်းရသွားရင် Premiere လုပ်မယ် ဆိုလဲ မခက်တော့ပါဘူး။ သဘော လေးတွေ ကတော့ သိပ်မကွာပါဘူး။ Premiere Version နိမ့်တာ လေးတွေ ရှာကြည့်အုန်းပေါ့ဗျာ။ Soft က အဲလောက်အရေးမကြီးပါဘူးဗျာ။ လုပ်ချင်စိတ်နဲ့ လုပ်ဖြစ်ဖို့က အရေးကြီးပါတယ်နော် အဆင်မပြေတာလေးတွေ အခက်အခဲလေးတွေ ဒီမှာ ရေးခဲ့ထားခဲ့ပါ။ ကျနော် ကြိုးစားပြီး ဖြေပေးပါမယ်။ တခြားသိတဲ့ ညီအကိုမောင်နှမတွေ ကလည်း ၀င်ပြီး ကူညီပေးပါလိမ့်မယ် တစ်ယောက် အခက်အခဲကို သိသလောက် ၀ိုင်းပြီး ကူညီနေကြတာ မိသားစု ဆိုတဲ့ သဘောကတော့ ဒါပါပဲ
Last edited by bonge; 02-05-2009 at 01:21 AM..
ကိုလေးအောင်, ဖန်ဆင်းရှင်, ဇော်ရဲပိုင်, boya, minminc, thetzin
အစ်ကိုရေ ဗွီစီဒီ စာတန်းထိုးတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲယား တစ်ခုတော့ တွေ့ထားတယ် သုံးတော့ မသုံးဘူးသေးဘူးလေ စမ်းသုံးကြည့်ရင်တော့ အောက်မှာပေးထားတဲ့ လင့်လေးကိုဒေါင်းလိုက်လေ ။ ကျွန်တော်လည်း မြန်မာ့ အိုင်တီလောက ဖွံ့ဖြိုးမှုက တွေ့လို့ ပြန်တင်ပေးလိုက်တာပါ ။အသုံးပြုလို့ရရင်လည်း နည်းလမ်းလေးတွေ ပေးကြပါဦးဗျာ ။အခု ကျွန်တော်ကွန်ပြူတာပျက်နေလို့ စမ်းလို့ မရသေးလို့ပါ။
Last edited by paulgyi; 03-05-2009 at 08:38 AM..
ကိုလေးအောင်, ဖန်ဆင်းရှင်, ကျော်စွာမင်း, bonge, thetzin
ဟုတ်ကဲ့ အစ်ကို ရေ ကျွန်တော်လုပ်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်....ကျေးဇူးပါနော်
ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့ခွေက ဗွီစီဒီလိုမျိုး တစ်ပုဒ်စီလုပ်ချင်တာ ulead ထဲကိုထည့်လိုက်
ရင် အကုန်လုံးတစ်ဆက်တည်းဖြစ်ကုန်မှာပေါ့...အဲဒါတစ်ပုဒ်စီ ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ
တစ်ပုဒ်စီကို save မှတ်ပြီး burn ရမှာလား ခွေဘမ်းရင် ulead save တွေကိုဒီတိုင်းထည့်ဘမ်းလို့
ရလား ဗွီစီဒီဖြစ်ဖို့ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ ကူညီလက်စနဲ့ကူညီပါဦးနော်
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ lawliet အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Replay Media Catcher 1.0.0.5 - Capturing all Online Video ရဲမာန်အောင် Applications 1 21-06-2011 05:16 PM
Flash Video for Professionals: aung myint E-books များ530-10-2010 07:32 AM
A-one.Video.Joiner.v4.64.Incl.Keymaker-ARN.rar littleman Applications225-08-2008 04:27 AM
WM VIDEO & AUDIO Recorder 11 လူဖုန်း Applications005-05-2007 11:10 PM